BUDDHIST TERMS' Dictionary: NOBLE DISCIPLE - အရိယသာဝက
NOBLE DISCIPLE - အရိယသာဝက
NOBLE DISCIPLE Ariyasᾱvaka
အရိယသာဝက - အရိယာဖြစ်သော တပည့်။
(၁) ပကတိသာဝက - ပါရမီဖြည့်မှု သီးခြားမရှိ၊ အရိယဖြစ်ချိန်တန်၍ အရိယာဖြစ်သော သူလိုငါလို ပုဂ္ဂိုလ်စုများ၊
(၂) မဟာသာဝက - ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီဖြည့်ရသော ရှစ်ကျိပ်သော အရိယာတပည့်၊
(၃) အဂ္ဂသာဝက - တစ်သင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီဖြည့်ရသော အမြတ်ဆုံးသော တပည့်သာဝက တို့ ဖြစ်သည်။
Three types of ariya disciple:
(1) The ordinary ariya disciple who attains ariyahood on gaining spiritual maturity, who has had no fixed duration to attain this goal, Pakatisᾱvaka.
(2) The eighty great disciples who had to undergoaperiod ofahundred thousands kappas or world-cycles in fulfilling the necessary Perfection, Mahᾱsᾱvaka.
(3) The (two) eminent Chief Disciples who had to undergoaperiod of one asaṅkheyya andahundred thousand world-cycles in fulfilling the necessary Perfection, Aggasᾱvaka.